September 11, 2020 – Xorriya Online
Xasan Sheekh iyo Jawaari oo yeeshay kulan qado sharaf ah
Madaxweynihii hore Soomaaliya ahna guddoomiyaha xisbiga Midowga Nabadda & Horumarka, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta kulan la qaatay gudoomiyihii hore ee golaha shacabka, Maxamed Jawaari. Kulankaasi ayaa waxa uu ka dhacay hoyga madaxweyne Xasan uu ka dagan yahay magaalada Muqdisho, oo uu qado sharaf ugu sameeyay Jawaari. kulankaasi ayaa waxa looga hadlay xaalad siyaasadeedka cakiran […]
Madaxweyne kuxigeenka Cali Daahir Ciid Galmudug oo gaaray Nairobi
Madaxweyne ku xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa goor dhaw gaaray magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Safarka Madaxweyne kuxigeenka ayaa daaraan ka qayb galka shirar looga hadlayo hormarinta dowlad goboleedka Galmudug oo maalmaha soo socda ka furmaya Nairobi. Safarkan uu Cali Ciid ku tegay Nairobi ayaa ku soo aadaya, xilli uu madaxweyne Qoorqoor ku suganyahay […]
Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland oo magacaabay guddi ka kooban 14 xubnood
Madaxwayne ku xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa goor dhaw magacaabay guddiga qaban qaabada aaska Allah ha naxariistee gudoomiyahii rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland Shaafi Raabi Kaahin. Guddigan ayaa ka kooban wasiirro iyo mas’uuliyiin kale oo tirsan maamulka Jubbaland, waxaana guddoomiye looga dhigay Geelle Maxamuud Aadan oo ah wasiirka beeraha Jubbaland. Qof isku […]
Madaxweyne Axmed Madoobe oo si degdeg ah ugu safray Kismaayo
Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmad Maxamed islmaam Madoobe oo maalmahaan Safar ku joogay Muqdisho ayaa goordhaw u duulay Magaalada Kismaayo. Ujeedka safarka Madaxweynuhu waa ka qeyb galka Aaska Guddoomiyihii Rugta Ganacsiga Jubbaland Shaafi Raabi oo ku Geeriyooday Qarax Ismiidaamin ahaa oo lagula Eegtay Magaalada Kismaayo. Axmed Madoobe ayaa magaalada Muqdisho ugu sugnaa si uu uga […]
Jubbaland oo ka hadashay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay Kismaayo
Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa ka tacsiyeey geerida gudoomiyahii rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland Shaafi Raabi Kaahin iyo muwaadiniinta kale oo maanta ku geeriyooday qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay Kismaayo. “Madaxweynahu waxuu Allah uga baryayaa in uu naxariistii Jano ka waraabiyo guddoomiye Shaafi iyo intii la dhimatay, sidoo kalena dadka dhaawaca […]
Wararkii ugu dambeeyey qaraxii Kismaayo iyo Shaafi Raabi oo dhaawicii u geeriyooday
Faahfaahino dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayaaan qarax ismiidaamin ah oo Maanta ka dhacay Magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hoose, kaas oo geystay khasaaro isugu jira dhimahso iyo dhaawac ah. Guddoomiyihii Rugta Ganacsiga Maamulka Jubbaland Shaafi Raabi Kaahin ayaa u geeriyooday dhaawicii kasoo gaaray qaraxaas kadib Salaaddii Jimcaha sida ay ay xaqiijiyeen Mas’uuliyiin ka […]
Degdeg: Qarax xoogan oo ka dhacay bartamaha magaalada Kismaayo
Wararka laga helayo magaalada Kismayao ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ay sheegayaan in qarax weyn uu ka dhacay Magaalada Kismaayo, kaas oo laga maqlay Xaafadaha kala duwan ee Magaaladas. Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in qaraxa uu ahaa Ruux isku soo xiray jaakad ay qarax ku xiran yihiin uu isku qarxiyay iridda hore ee […]
Safaaradda Mareykanka oo war kasoo saartay kulanka Dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ee Muqdisho
Safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho ayaa si weyn u bogaadisay imaatinka ay madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah Federaalka ku yimaadeen caasimadda si loo dhameeyo wadahadallada. Safaaraddu waxey aaminsan tahay in imaatinka madaxweynayaasha ay tahay wax weyn isla markaana ay ka shaqeyn doonaan dhameynta wadahadalladii socday iyo hirgalinta hab walba oo la isku raaco iney doorashada […]
Puntland oo maxkamadeenaysa dadka diida bixinta canshuurta
Duqa Caasimadda Garoowe Axmed Siciid Muuse ( Axmed Barre), ayaa markii u horraysay shaaciyay in ay maxkamad la tiigsan doonaan dadka bixin waaya canshuurta sannadlaha ee laga qaado guryaha. Duqa oo su’aal laga weydiiyay sababta ay Dowladda Hoose albaabada ugala baxdo guryaha Canshuurta lagu leeyahay, ayaa sheegay in dadka ugu badan ee aan canshuurta bixin […]
Burcadda Internetka Ruushka oo mar kale beegsaday doorashada Mareykanka
Burcad dhanka internetka ah oo xiriir la leh Ruushka,Shiinaha iyo Iiraan ayaa isku dayaya inay macluumaad sirdoon ka helaan shaqsiyaad iyo kooxaha ku lugta leh doorashada madaxwaynanimada Mareykanka ee 2020, waxaa sidaasi sheegtay shirkadda Microsoft. Burcadan dhanka internetka ee iyagu jabsaday ololihii doorashada 2016 ee xisbig Dimuqraadiga ayaa mar kale ku lug leh howlahani, sida […]